The Myanmar Blogs all over the world: our aim
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာရှိကြတဲ့ မြန်မာလူငယ်တွေရဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို လက်လှမ်းမီသလောက်ပြုစုတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်အသစ်များထည့်သွင်းလိုပါက mmblogdirectory@gmail.com သို့ mail ပို့ပြီးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ယုခု ဘလော့ဂ်လမ်းညွှန်ပါ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းပေးသော ကိုမျက်လုံး နှင့် ဘလော့ဂ်ပြုလုပ်ပေး သော ကိုနေဘုန်းလတ် တို့ကို ကျေးဇူးအထူးတင် ရှိပါတယ်။
ယခု ဘလော့ပါ ဒေတာများသည် မြန်မာ မြူးဇစ်ဒေါ့ကွန်း၊ ကိုညီလင်းဆက်၏ ဘလော့ဒိုင် ယာထွီ နှင့် အခြားသော ဘလော့ဂ်ကာ လစ်များက ရယူစု ဆောင်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လတ်တလောတွင် အကြမ်းဖျင်းသာ တင်သာခြင်း ဖြစ်သော်လည်း နောင်တွင် အက္ခာရာစဉ် အလိုက် နံပါတ်စဉ်အလိုက် ဘလော့ဂ်ရေးသည့် တက်တန်းအလိုက် အစရှိ သဖြင့် ထပ်မံထည့် သွင်းသွားပါမည်။
Posted by Myanmar Blog Directory at 7:38 AM
i think my blog http://www.steveevergreen.blogspot.com/ is very young and notaquality one. But I would like to let you know it exists. Thanks
ကျွန်တော့် ဘလောဘ် ကိုလည်း list ထဲထည့်ပေးစေခြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
New Genaration said...
I request you you should make to see myanmar font. How to join/apply you
Thank you resent me to akminn.2007@gmail.com
hey why my myanmar blog is not included .... be ware
i amaburmese blogger.but my blog is not so good one. ;P
pls add my blog...Thks
I am,too,a burmese blogger.But mine's not much about burmese cuz mine's new.MY BLOG INCLUDS FREE/NON-FREE DOWNLOADS,POEMS,GAMES AND ABOUT ME.I'll update it everyday,so there's gonna be new stuff everyday.PLEASE PLEASE PLEASE VISIT MY BLOG,OKAY?PLEASE!!!!!!THANKS:)
I want to show my blog on your site.
If you have time ,come to my blog. Welcome fri.
ကျနော့် ဘလော့ကိုလည်း Add လုပ်ပေးပါ။
Please add my blog . Thanks
Dream World 2009 said...
Itz good idea that u listed all the link of myanmar blogs all over the world... go ahead!
Btw, U havent post my link in ur list.... :P
Korea-Myanmar Mutual Benefiter said...
ပါလိုခွင့်ရလျှင် နော်နော်လည်း ပါမယ်လေ။
ကျွန်တော်ဘလော့ဂ်လေးတစ်ခုဖန်တီးထားပါသည်..Full Version ဖြစ်သည့် ဂိမ်းများနှင့် Software အချို့ကို တင်ပြပေးသွားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ကျွန်တော့ ဘလော့ဂ်လေးကို စာရင်းသွင်းပေးစေလိုပါသည်။ trial version game များကိုသာကစားနေကြရသူများအတွက်.. ကျေနပ်မှုအပြည့်ရစေချင်သည့်ဆန္ဒကြောင့်ဘလော့ဂ်ရေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
http://www.it-traveller.blogspot.com/ (Game Blog)
koung tal byar....poem site twae
ကွန်ပျူတာ နည်းပညာရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မျှဝေ ပေးဖို့ ကျနော့်ဘလောဂ့်ကို ရည်စူးတင်လိုက်ရပါသည်။ ပူးပေါင်းလိုသူများလည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
လျှံဇွဲကို (စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်) said...
ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်ကိုလည်း ထည့်ပေးလို့ ရမလား ခင်ဗျား။ ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်။
IT ညီငယ် said...
ကျွှန်တော့်ရဲ့ ဘလော့ကိုလည်း ထည့်သွင်းစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ http://www.itnyingediary.co.cc ပါ။
William Greatman said...
ကျွန်တော် link နည်းနည်းတင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် blog ကတော့ website နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ နည်းပညာတွေ ရှယ်ပေးတာပါ။ link စာသားကို Myanmar Website Tutorials ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ http://www.mmwebsharing.blogspot.com ကို link ချိတ်ပေးစေလိုပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ရနိုင်ဦးမယ်ဆိုရင် http://www.myanmarwebdesigner.com ကိုလည်း link စာသား Myanmar Web Designer - SEO services, website design creator နဲ့ တင်ပေးစေလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
please include http://myanmarblogreader.blotspot.com
please include http://myanmarblogreader.blogspot.com
Clifton Michael said...
Thanks for sharing this business topic with it would be really helpfull
The Blogs List of Myanmar Bloggers